Xog: Imaaraadka oo shir lagu cadaadinayo DF Somalia ku qabanaya Dubai - Caasimada Online
Home Warar Xog: Imaaraadka oo shir lagu cadaadinayo DF Somalia ku qabanaya Dubai
Xog: Imaaraadka oo shir lagu cadaadinayo DF Somalia ku qabanaya Dubai
Dubai (Caasimada Online) – Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa lagu wadaa inay dhowaan magaalada Dubai ku shiriso qaar ka mid ah ganacsatada ugu waa weyn ee Soomaaliya ee hantida iyo guryaha ku leh dalkaas, sida ay ogaatao Caasimada Online.
Shirkan ayaa waxaa looga gol leeyahay in ganacsatada lagu cadaadiyo inay cadaadis saaraan dowladda Soomaaliya, si ay ugu biirto xulufada dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka ee xiisadda ay kala dhaxeyso dalka Qatar.
Ganacsatada shirka loo qabanayo waxaa ku jira 21 ganacsade, oo sidoo kale xubno ka ah baarlamanka Soomaalida, iyo qeybaha kale ee dowladda Soomaaliya.
“Waxaa ganacsatada loo sheegi doonaa inay ilaashadaan dantooda, oo macnaheedu yahay in loogu hanjabayo, haddii aysan dowladda Soomaaliya cadaadin in sharciyada ay ku tagaan Imaaraadka lagala noqon doono” Waxaa sidaas yiri ganacsade codsaday inaan la magacaabin.
Imaaraadka ayaa rumeysan in maadaama dowladda dhaqaale badan ka hesho ganacsatada ay suurta-gal noqon karto inay cadaadiskooda u hoggaansato.